Wararka - Cilmi-baarista Wershadaha Birta Toddobaad kasta: Soo-bixinta iyo Baahida daciifka ah, Sugitaanka alaabada si loo nadiifiyo
Iyadoo ay saamaysay hoos u dhaca ku yimid qiimaha bifocals todobaadkan, qiimaha biraha ayaa si aad ah hoos ugu dhacay, qiimaha birta ayaa hoos u dhacay isla heerka bifocals, taas oo keentay tan faa'iido bir ah oo aan ballaarin sidii aan filaynay. Sababta ugu weyn ayaa ah inkasta oo dhimista wax-soo-saarka hadda ay sii xoogaysanayso, Si kastaba ha ahaatee, dhinaca baahida ayaa sidoo kale daciif ah. Marka la eego mugga wax iibsiga ee xargaha xargaha ee Shanghai, marka lagu daro horumarka joogtada ah ee Ogosto ilaa Sebtembar, hoos u dhaca bisha-bilaha mar kale ka dib Noofembar. Baahida daciifka ah ee silsiladda dhismaha hantida ma-guurtada ah ayaa ka dhigaysa mid adag in la wanaajiyo baahida dib u soo celinta muddada gaaban.
Goorma ayay faa'iidada tan tan ee birta ah balaadhin doontaa mar kale? Waxaan aaminsanahay in alaabada silsiladda warshaduhu ay u baahan tahay in si buuxda loo dhammeeyo. Inkasta oo alaabada birta ee hadda jirta ay sii yaraanayso, haddana waxa jira koror 30+% ah marka loo eego bilawga sannadka, taas oo muujinaysa in alaabtu dhammaanayso sannadka oo dhan. Ka dib marka qayb ka mid ah alaabada korodhka ah la tirtiro, saamaynta dhimista wax soo saarka dhinaca sahayda ayaa laga yaabaa inay si dhab ah u muuqato.
Laga soo bilaabo tirakoobka Xafiiska Tirakoobka, wax soo saarka birta ceyriinka ah ee Sebtembar ugu horeysay waxay ahayd 806 milyan oo tan iyo wax soo saarka birta doofaarku waxay ahayd 671 milyan oo tan, taas oo ahayd 2.00% iyo -1.30% sanad kasta siday u kala horreeyaan. Wax soo saarka birta doofaarka ayaa dhacday markii ugu horeysay, saameynta hoos u dhigista wax soo saarka ayaa muuqata. Marka loo eego aragtida guud ee sahayda iyo dalabaadka birta, foosha sahaydu way ka weyn tahay foosha baahida. Maadaama kaydka xiga ay ku filan yihiin, saameynta dhimista wax soo saarka ayaa si tartiib tartiib ah u muuqan doonta.
Birta birta iyo kookaha double waa kharashka ugu badan ee wax soo saarka birta birta ah. Waqtigan xaadirka ah, macdanta birta ayaa hoos uga dhacday heer sare. Marka qiimaha kookaha labanlaabanto uu ku sii socdo heerka macquulka ah ee xakamaynta siyaasadda, qiimaha birta birta ah ayaa laga yaabaa inay si tartiib tartiib ah u kordho. Marka laga eego saameynta yar ee hoos u dhigista wax soo saarka, fiiro gaar ah u yeelo Linggang, Fangda Special Steel, Xingang, Sangang Minguang, iwm.; Marka laga eego dhinaca koritaanka, waxaa lagula talinayaa in aad fiiro gaar ah u yeelato: Qalabka Gaarka ah ee Jiuli iyo Qalabka Gaarka ah ee Guangda.
Baahida gabowgu waa daciif, xannibaadaha wax soo saarkuna way sii socdaan
Mugga wax iibsiga ee dunta dunta ee Shanghai wuxuu ahaa 15,900 tan, hoos u dhac 3.6% marka loo eego bishii hore, iyo hoos u dhac 17,200 oo tan marka la barbar dhigo isla muddadaas sannadkii hore, iyo hoos u dhac sannad kasta ah 52.0%. Heerka shaqo ee foornooyinka qaraxa toddobaadkan wuxuu ahaa 48.48%, hoos 3.59% marka loo eego bishii hore; heerka shaqo ee foornooyinka korontada ayaa ahaa 61.54%, oo hoos uga dhacay 1.28pct bishii hore.
Qiimaha macdanta birta ayaa sii waday hoos u dhaca, iyo qiimaha laba-coke-ga ayaa kor u kacay
Qiimaha birta mustaqbalka ayaa hoos u dhacay 55 yuan/ton ilaa 587 yuan/ton, korodhka -8.57%; Coking mustaqbalka qiimaha dhuxusha ayaa hoos u dhacay 208 yuan/ton ilaa 3400 yuan/ton, korodhka -5.76%; Qiimaha booska mustaqbalka ee Coke wuxuu kacay 210 yuan/Ton ilaa 4326 yuan/ton, korodhka 5.09%. Wadarta guud ee shixnadaha birta ee dibadda laga keenay waxay ahayd 21.431 milyan tan, koror ah 1.22 milyan oo tan ama 6% bishii; wadarta guud ee macdan ka soo daga dekedaha waqooyi waxay ahayd 11.234 milyan oo ton, hoos u dhac 1.953 milyan oo tan ama 15% marka loo eego bishii hore.
Qiimaha birta ayaa hoos u dhacay, faa'iidada guud ee tan ee birta ayaa hoos u dhacday
Marka loo eego faa'iidada alaabooyinka kala duwan ee birta, qiimaha macdanta birta ayaa sii waday hoos u dhaca iyada oo qiimaha bi-coke uu kor u kacay oo hoos u dhacay, qiimaha biraha ayaa bilaabay inuu hoos u dhaco, laakiin qiimaha birta ayaa hoos u dhacay, iyo faa'iidada guud ee tan ee birta ayaa hoos u dhacday. Marka la eego burburka, faa'iidada guud ee tan ee dib-u-socodka muddada dheer waa 602 yuan/ton, faa'iidada guud ee tan ee socodka gaaban waa 360 yuan/ton. Wareegga qabowgu wuxuu leeyahay faa'iidada ugu sareysa, oo leh faa'iido guud ee tan oo ah 1232 yuan/ton geeddi-socodka dheer iyo RMB 990/ton geeddi-socodka gaaban.
Digniinta khatarta ah: Soo kabashada dhaqaala-dhaqaale ma aha sidii la filayay; heerka sicir-bararka adduunku wuu ka sarreeyaa wixii la filayey; Korodhka wax-soo-saarka macdanta ma buuxinayo filashadii; Horumarka horumarinta iyo tallaalka tallaalka taajka cusub ayaa ka hooseeya sidii la filayay.
Waqtiga boostada: Nov-08-2021